अज्ञात समुहद्वारा रौतहटको वडा कार्यालयमा आगजनी, कागजपत्र जलेर नष्ट – OMKARTIMES
अज्ञात समुहद्वारा रौतहटको वडा कार्यालयमा आगजनी, कागजपत्र जलेर नष्ट
ओमकार २०७६ श्रावण १५, ११:४१ बजे
रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ३ को वडा कार्यालयमा अज्ञात समुहले आगजनी गरेको छ । कार्यालयमा भएको आगजनीबाट वडा कार्यालयमा रहेका कागजपत्र जलेर नष्ट भएको छ ।
बुधबार विहान १ बजेको समयमा समुहमा आएका ब्यक्तीहरुले कार्यालयमा आगजनी गरेको स्थानीयले बताएका छन् । आगजनीबाट कार्यालयमा रहेको कम्प्युटर , दराज, टेवुल, कुर्सी तथा कागजपत्र जलेर नष्ट भएको वडा अध्यक्ष वोधनाथ देवकोटाले बताए । आगजनीबाट फर्निचर सहित करिव ७ लाख बराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको सम्पुर्ण कागजपत्र जलेकाले कार्य सम्पादनमा समस्या हुने उनको भनाई छ ।
घटना लगतै सर्वसाधरण तथा सुरक्षाकर्मी लगायतको सहयोगमा आगो भने नियन्त्रणमा लिईएको थियो । आदर्श सामुदायिक वनको भवनमा वडा कार्यालय रहेको थियो । आगजनीका कारण भवनमा समेत आंशिक क्षति पुगेको वडा अध्यक्ष देवकोटाले बताए । घटनाबारे अनुसन्धान भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक कबित कटुवालले बताए । यसैगरि वडा कार्यालय नजिकै राखिएको बम नेपाली सेनाको टोलीले वुधबार विहान डिस्पोज गरेको छ । कार्यालय जाने सडकमा राखिएको बमका कारण स्थानीय भने त्रसित भएका थिए ।
वडा कार्यालय वरपर वा बम राखिएको स्थानमा कुनै पर्चा नभेटिएपनि नेत्र विक्रम चन्द (विप्लब) समूहले गरेको हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन् । उक्त घटनामा संग्लन रहेको आशंकामा प्रहरीले चन्द्रपुर ३ स्थित गैडाटारबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिसँग सोधपुछ तथा अनुसन्धान भैरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जानकारी दिएको छ । नेत्र विक्रम चन्द (विप्लब) समूहले वुधबार आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव रौतहटमा परेको छ ।
चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रमा रहेका शैक्षिक संस्था तथा पसल बन्द छ भने यातायातका साधन भने कम गुडेका छन् । गौर लगायतका दक्षिणी भेगमा भने बन्दको प्रभाव परेको छैन।
आज भदौँ ९ गते सोमबारको राशिफल
रबि लामिछाने पुनः हिरासतमा,रबिका समर्थक निराश
सञ्चारमन्त्री बास्कोटा सवार गाडीले किच्यो मंयुर, कारवाही गर्न स्थानीयको माग !
आईतबार सुर्य देवको दिन, उहालाई उनको यि प्रिय बस्तु चडाएर दिउ अर्घ्य
आत्महत्या दुरुत्साहन प्रकरणमा नयाँ प्रमाण फेला परेको एसपीको खुलासा
कार्यालयमै नगई तलब र भत्ता बुझ्छन् स्थानीय कर्मचारी
भ्रमण वर्ष : न प्रचार न पूर्वाधार !
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटनलाई राखेको छ । यसो त यो पर्यटकीय हब नै हो । सरकारले पर्यटकलाई प्राथमिकता दिएर ५ वर्षका लागि नीति
पत्रकार पुडासैनी ‘आत्महत्या’ प्रकरणः ‘गलफ्रेन्ड’ भेट्न कोठा भाडामा
चितवनको कंगारु होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले ‘गलफ्रेन्ड’सँग भेट्न छुट्टै कोठा लिएको नयाँ तथ्य भेटिएको छ। श्रीमती सम्झना घिमिरेसँग
अब मदिरा उद्योग खोल्न मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडाैँ । अब मदिरा उत्पादनसम्बन्धी कुनै पनि उद्योग खोल्न मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित
सेनामा भुँडेलाई कम अवसर
काठमाडौं । नेपाली सेनामा जवान तथा उच्च अधिकारीहरू मोटाउँदै जानुका साथै भुँडे, अल्छी र अस्वस्थ हुन थालेपछि उचाइ र तौलबीचको अनुपात मिलाउनु जरुरी भएको छ। यसका
मेलम्चीको खानेपानी आयोजना : सीएमसीले डेढ अर्ब तिरेन, मजदुर र सप्लायर्स बिचल्लीमा
काठमाडौं । मेलम्चीको खानेपानी आयोजनामा सुरुङसहित अन्य निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सीएससीले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नतिरी ठेक्का तोडेर फर्किँदा स्थानीय सप्लायर्स, मजदुरलगायतको बिचल्ली
प्रमुख कार्याकारी अधिकृत: सन्तोष बिष्ट
ईमेल ठेगाना: omkaartimes108@gmail.com